Markii Hore Cristiano Ronaldo, Haddana Gareth Bale Oo Man United Ku Biiri Kara Iyo Labada Kooxood Oo Horumar Wayn Ka Sameeyay Wada Xaajoodyo U Furmay. – GOOL24.NET
Markii Hore Cristiano Ronaldo, Haddana Gareth Bale Oo Man United Ku Biiri Kara Iyo Labada Kooxood Oo Horumar Wayn Ka Sameeyay Wada Xaajoodyo U Furmay.
Dhawr todobaad ka hor waxaa bilawday wararkii Cristiano Ronaldo la xidhiidhinayay Juventus oo markii hore aan si buuxda loo rumaysan wuxuuna isla markiiba ka soo jeedsaday Juventus isaga oo 100 milyan ugu biiray laakiin haddana waxaa soo baxay warar cusub oo sheegaya in kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ay horumar wayn ka sameeyeen wada xaajoodyo u furmay oo ay Red Devils ku doonayso saxiixa Gareth Bale.
Sida ay warar cusub oo soo baxay sheegayaan, Manchester United ayaa horumar fiican ka samaysay wada xaajoodyo ay kula jirto maamulka Real Madrid oo ay ka doonayaan saxiixa Gareth Bale waxaana la filan karaa in Bale uu isna ka dhaqaaqi karo Santiago Bernabeu.
Wargayska Manchester Evening News ayaa shaaca ka qaaday in Gareth Bale uu bartilmaameed muhiim ah u yahay Man United xagaagii labaad oo xidhiidh ah waxayna Red Devils rajo ka qabtaa in qaabkii Juventus oo kale ay Madrid ugala heshiin karto saxiixa Bale.
Waxaana warkan lagu sheegay in go’aanka kama danbaysta ah uu Gareth Bale yeelan doono haddii uu sii joogayo iyo haddii uu Man United u wareegayo: “Odhaahda ugu danbaysa waxaa yeelan doona Bale ee haddii uu ku soo wajahan yahay Old Trafford” ayuu qoraalkan lagu sheegay.
Dhawaan wakiilka Gareth Bale ee Jonathan Barnett ayaa ESPN FC u sheegay in xidiga ree Wales uu mustaqbalkiisa kala hadli doono kooxdiisa iyo waliba tababaraha cusub ee Julen Lopetegui isla markaana ay ku socon doonaan wixii ka soo baxa.
Waxaana hadalkii wakiilka Bale ee Jonathan Barnett ka mid ahaa: “Gareth waxa uu la hadli doonaa Madrid iyo tababaraha (Julen Lopetegui) halkaas ayaananu ka socon doonaa”. Gareth Bale ayaa ka mid ahaa sababihii uu Zinedine Zidane shaqada uga tagay iyada oo madax wayne Perez uu doonayay in shaxdiisa uu qayb ka noqdo.
Laakiin Zidane ayaa Garth Bale kaydka ku caajisiyay markii uu wax qabadkiisa ku qanci waayay wuxuuna ka doortay Marco Asensio, Lucas Vazguez iyo Isco laakiin heshiiska Bale ayaa dhacaya 2022 balse waxa uu kadib finalkii Champions League uu sheegay in mustaqbalkiisa uu ka tashan doono maadaama oo uu boos joogto ah doonayo.
Iyada oo Cristiano Ronaldo uu haddaba ka baxay Real Madrid isla markaana la filayo in Karim Benzema uu isna bixi doono ayay hadda soo baxayaan warar cusub oo sheegaya in Man United ay horumar ka samaysay wada xaajoodkii ay Real Madrid kula jirtay ee ay ku doonayso saxiixa Bale.